:: My Little World ::: 2012
Posted by Nay Nay Naing at 12/30/2012 10:52:00 PM0comments
Obama Embraces Democracy In Burma
Posted by Nay Nay Naing at 11/20/2012 10:32:00 AM0comments
Free Movies Online: Watch32
Hari Raya Haji အားလပ်ရက်မှာ အွန်လိုင်းကနေ ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ဖြစ်တယ်။ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် ပေးလို့အဲဒီဆိုဒ်ကို သိခဲ့ရတာတာပါ။ Download လုပ်စရာ မလို၊ (streaming) တိုက်ရိုက်ကြည့်ရတာပါ။ တင်ပေးထားနေရာတွေ များတော့ ကိုယ်အဆင်ပြေတဲ့ နေရာကို ရွေးကြည့်လို့ ရတယ်။ ကျွန်မ ကတော့ Google လင့်ကနေ ကြည့်တာများတယ်။ စောင့်စရာ မလိုဘူး။ အပိုင်းတွေနဲ့ တင်ပေးထားလို့တစ်ပိုင်းပြီးတပိုင်း ကြည့်ရတာတော့ရှိတယ်။ ခြုံပြောရရင် အတော်လေး အဆင်ပြေပါတယ်။
ရုပ်ရှင်တွေက အစုံပါပဲ။ စိတ်ဝင်စားရင် သွားကြည့် သင့်တယ်။
ကျွန်မကတော့ ပိတ်ရက် ၃ ရက် အတွင်း အဲဒီဆိုဒ်ကနေ ရုပ်ရှင် တော်တော်များများ ကြည့်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ကြည့်ဖြစ်တာတွေက... Animation တွေ ပါပဲ။
ဒီနှစ်ကားကို ကြည့်ချင်နေတာ အတော်ကြာပြီ၊ ရုံတင်တုန်းက မအားတာနဲ့ သွားမကြည့်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။
ရုံတင်တုန်းက ကြည့်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ခုနောက်တစ်ခေါက် ထပ်ကြည့်ဖြစ်တယ်။
အဟောင်းထဲက ဒါတွေလည်း ကြည့်ဖြစ်ခဲ့သေးတယ်။
၃ရက် အတွင်းမှာ ဒီလောက်ပဲ ကြည့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ရုပ်ရှင်တွေ နဲ့တခြား Category အောက်က ရုပ်ရှင်တွေတော့ နောက်မှ အချိန်ရရင် ရသလို ဆက်ကြည့်မယ် စိတ်ကူးမိတယ်။
Special thanks to Kalvin Alexander
Posted by Nay Nay Naing at 11/07/2012 10:52:00 PM2comments
ခုနှစ်ပိုင်း ကိုယ့်မျက်နှာက အဲ့ဒီလို ဖြစ်နေတဲ့ အချိန် များနေတယ်။
ဒါကြည့်ပြီး ဒီနေရာကို သတိရလို့ရောက်လာခဲ့ရပြန်တယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 8/30/2012 02:41:00 PM0comments
ဒီနေ့သောကြာနေ့ ... အခုနေ အလုပ်မှာ တခြားသူတွေ ဘာလာပြောပြော
I don't care.. Friday!!!
♪We don't care, we don't care, we don't care cuz it's Fri-i-daay!♪
လို့ သာ ပြန်ပြောလိုက်ချင်တော့တယ်။
Boss စီကို ဒီ Youtube လင့်လေး ဒါမှာမဟုတ် eCard လေး ပို့ လိုက်ရင် ကောင်းမလား။
Source : Hoops & Yoyo - Office Fun
Posted by Nay Nay Naing at 5/11/2012 02:14:00 PM2comments
Volunteers at SPD [7 April 2012]
Counting money for Society for the Physically Disabled
April7(Saturday) 9am to 1pm
From Volunteers at SPD [7 April 2012]
Thank You Noted From Organizer
[09 April 2012]
Thank you so much for the time and effort given last Sat! You have beenablessing!
On an average count, we had cleared more than 50 bags of tins and in total about 1700cans OR MORE!
Posted by Nay Nay Naing at 4/09/2012 11:22:00 PM0comments
The Most I can do..
“The Most I can do for my friend is simply to be his/her friend.”
please do not ask me to do other things
Posted by Nay Nay Naing at 3/13/2012 09:28:00 AM0comments
Someone is at: "I want to do it"
I am at: "I can do it but I won't do it"
Posted by Nay Nay Naing at 3/08/2012 02:30:00 PM2comments
တုံ့ ပြန်ဖို့ မလိုဘူးလား
တွယ်တာမှုတွေ ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ မင်းမျက်လုံးရဲ့အကြည့်ကို
ပီတိလေးတွေ တစိမ့်စိမ့်ဖြာကာ ရင်ခုန်သံကြား ခံစားမိတယ်..
ကမ္ဘာမြေပြင်ရဲ့ အမြင့်ဆုံးတစ်နေရာ ရောက်ရသလိုပဲ
ကြင်နာမှု့ တွေအပြည့်အ၀ပါတဲ့ မင်းနှုတ်ခမ်းကစကားကို
သံသယကင်းစွာ တသိမ့်သိမ့်ရင်မှာ နားဝင်ချိုးအေး ပြန်ကြားမိတယ်
အသာယာဆုံး အချစ်ကဗျာကြောဝယ် နစ်မျောသလိုပဲ
အိုး.. အဖိုးထိုက်တန်လှတဲ့ အချစ်ရဲ့ လက်ဆောင်
တုံ့ ပြန်နှင်းမယ် ကိုယ့်မေတ္တာ
ဘာကြောင့်များ လျစ်လျူရှု့ လို့ထားခဲ့ရက်လဲ
တကယ်ဆို မင်းထက်မပိုရင်တောင်မှ မလျော့တဲ့ကိုယ့်အချစ်ပါ
တေးရေး။ ။ စိုင်းထီးဆိုင်
ဒီရက်ပိုင်း သူများရှယ်ထားတာတွေ့ လို နားထောင်ဖြစ်နေတဲ့ သီချင်း။ ဟိုးအရင် စိုင်းထီးဆိုင် ဆိုတုန်းကတည်းက ဒီသီချင်းကိုကြိုက်ခဲ့သလို အခုသူရဲ့ သမီးဖြစ်သူ ဆိုင်စံ ပြန်ဆိုထားတာကိုလည်း ကြိုက်တယ်။
စိုင်းထီးဆိုင် ကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့သီချင်းဆိုတာ သိခဲ့ပေမယ့် သူ ချစ်သူ (သူ့ ဇနီးသည်ဖြစ်လာတဲ့သူ) အတွက် ရည်စူး ရေးခဲ့တာဆိုတဲ့ သီချင်းရဲ့ နောက်ကွယ်ကဇာတ်လမ်ကို အဲဒီဖေ့ဘုတ်က ကွန်မန့် တွေ ဖတ်ပြီးမှ သိလိုက်ရတယ်။ (မှန်မယ် ထင်ပါတယ်)။ ဘာတွေရေးထားလဲ သိချင်ရင် ဒီမူရင်း တင်ထားတဲ့ [Facebook] မှာ သွားဖတ်ကြည့်လို့ ရတယ်။
စိုင်းထီဆိုင် ရဲ့ တုံ့ ပြန်ဖို့ မလိုဘူးလား [Download]
ဆိုင်စံ ရဲ့ တုံ့ ပြန်ဖို့ မလိုဘူးလား
Posted by Nay Nay Naing at 3/07/2012 10:38:00 PM 1 comments
"M" for M...
အလုပ်များတယ်။ ခေါင်းရှုပ်တယ်။ ဟိုလျှောက်ကြည့်ဒီလျှောက်ကြည့်လုပ်တယ်။
၂၀၀၉ ကရေးခဲ့ဖူးတာ ("N" for Nay ) ကိုပြန်ဖတ်မိသွားတယ်။
တခြားစာလုံးနဲ့ ပြောင်းရေးကြည့် မယ် စိတ်ကူးပြီး ရေးဖြစ်တယ်။ အာရုံပြောင်းတဲ့ အနေနဲ့ ပေါ့။
တစ်ယောက်တည်းဖြေကြည့်ရမှာ ပျင်းစရာကြီး ဆိုပြီး ဒီမေးခွန်းတွေကို ၅ မိနစ် အတွင်းအပြီးဖြေရအောင်လို့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို အဖော်စပ်လိုက်တယ်။ ၅ မိနစ်ပြည့်သွားတယ် Something found in the bathroom ကို စဉ်းစားမရလိုက်ဘူး။ သူငယ်ချင်းက အကုန်ရေးလို့ ရသွားတယ်။
ဒီမှာရေးတင် တဲ့အခါ blank ကြီးဖြစ်နေတာ မကောင်းလို့သူငယ်ချင်းစီက သူရေးထားတာကို ကူးချလိုက်တယ်။ ဘယ်သူက ဘယ်ဟာဖြေတယ် ဆိုတာ ဘယ်သူသိတာမှတ်လို့ ။
M for M... & M..
1. What is your name : M... M..
2. A four Letter Word : Mint Moon
3. A boy's Name : Martin Mike
4. A girl's Name : Marcy Megan
5. An occupation : Marine Magician
6. A color : Midnight Blue Maroon
7. Something you'll wear : Mask Mask
8. A food : Muffin Margarine
9. Something found in the bathroom : Mirror Mirror
10. A place : Mandalay Mandalay
11. A reason for being late : Miss the alarm Miss the bus
12. Something you'd shout : Man !!! Move!!
13. A movie title : Monster Inc Madagascar
14. Something you drink : Margarita Milo
15. A musical group : Metallica MLTR
16. An animal : Mouse Mouse
17. A street name : Manchester Street Main Street
18. A type of car : Mazda Maserati
19. The title ofasong : Moon River Miss Independent
20. A verb : Move Motivate
Posted by Nay Nay Naing at 3/02/2012 02:20:00 PM2comments
Posted by Nay Nay Naing at 2/26/2012 08:19:00 AM 1 comments
ကိုယ် လဲ သူမပိုင်
သူ့ကို လဲ ကိုယ်မပိုင်
ဘယ်သူ့ကိုမှ ဘယ်သူ မပိုင်
ကိုယ့် ကိုယ် ကိုယ်မှ ကိုယ်မပိုင်
အစိုးမရတဲ့ အနတ္တ အစစ်။
(မစ္ဇျိမ ပဏ္ဏာသ ရဌပါလသုတ် မြန်မာပြန်)
မရွှေဇင်ဦး ဘလော့မှာ ရှယ်ယာလုပ်ပေးထားတဲ့ သော်တာဆွေ ရေးသားသော ငွေကိုလေလိုသုံးသူ(မိုးကုတ်မြမောင် အကြောင်း) ၀တ်ထုတိုမှ ဖတ်မိပြီးတာလေးပါ။
Posted by Nay Nay Naing at 1/30/2012 08:49:00 PM 1 comments
Posted by Nay Nay Naing at 1/22/2012 11:28:00 AM0comments
“Just follow your heart and keep smiling!”
Posted by Nay Nay Naing at 1/15/2012 07:58:00 PM0comments